Hifu Machine, Anti Ukuguga Machine, Beauty Laser Machine - Sincoheren
Uchungechunge lwe-FDA Laser
Umshini we-Diode Laser
Umshini we-Laser we-Y Y
Umshini we-CO2 Laser Fraction
Umshini we-IPL SHR
Uchungechunge Lomzimba Omncane
Umshini Wokupholisa we-Cryolipolysis
Umshini wokuma kweKuma
Umshini we-Sincosculpt EM
Uchungechunge Lokusebenza Kokunakekelwa Kwesikhumba
Umshini we-PDT we-LED
Isungulwe ngo-1999, iBeijing Sincoheren S & T Development co., Ltd ingenye yokwenziwa okuholayo kwezixhobo zobuhle ezithuthukisiwe namadivayisi ezokwelapha ...
Ikhwalithi umphefumulo webhizinisi.Emiswe ngo-1999, iBeijing Sincoheren S & T Development co., Ltd. ingenye yokwenziwa okuhamba phambili kwezinsiza kusebenza ezithuthukisiwe zobuhle namadivayisi ezokwelapha. Imikhiqizo yethu ithengiswa kabanzi emikhakheni yezimonyo, i-aesthetics kanye ne-dermatology. Ukukhiqizwa kungaphansi kohlelo lwekhwalithi le-ISO13485 futhi kufana nesitifiketi se-CE.
I-IPL SHR Isikhumba Sokuvuselela Umshini IPL
Ubuchwepheshe bamuva be-IPL-SHR ukuthuthukiswa kwesizukulwane sethu sesithathu samasistimu wokwelashwa kokukhanya okukhanyayo okuhlakaniphile, kusetshenziswa ubuchwepheshe be-pulse ephelele. Izindlela zokwelashwa ezahlukahlukene zihlangana ndawonye nemodi ehlukile ukuhlangabezana nokufunwa kwamakhasimende.
Umshini we-Q-Switched Nd Yag Laser
I-Q-Switched Nd: I-YAG inamandla aphakeme kakhulu we-peak nama-nanoseconds-level pulse ububanzi. I-Melanin kumangqamuzana e-melanophore ne-cuticle anesikhathi sokuphumula esishisayo esifushane. Ingenza ngokushesha ama-granules amancane amukelwe amandla (i-tattoo pigment ne-melanin) ukuqhuma ngaphandle kokulimaza izicubu ezijwayelekile ezizungezile. Ama-granules ombala aqhunyisiwe azokhishwa emzimbeni ngokusebenzisa uhlelo lokujikeleza kwegazi.
808nm 755nm 4064nm Wavelengths Diode Laser Izinwele System Ukususwa System
I-Razorlase diode laser ihlanganisa ubude obude obungu-755nm 808nm 1064nm, obungafinyelela ngqo futhi bujule izinwele zezinwele. I-melanin ezinweleni zezinwele izomunca amandla e-laser ngokukhetha futhi ngokuphelele futhi izofudunyezwa. Ekugcineni, i-hair follicle stem cell izolimala.
UKUBONISANA NGAMAHHALA +86 137 1859 3357
IKHELI Isitezi se-4, iBlock A, Isakhiwo saseJinyun, uNombolo 43, uNorth Street, iXizhimen, eBeijing